Nleba ogwu ogwu nke ogwu COVID-19 malitere na Israel
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ahụike » Nleba ogwu ogwu nke ogwu COVID-19 malitere na Israel
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Israel Na -agbasa Akụkọ • News • Ịrụ ọrụ • Safety • Technology • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
A na-achịkwa ọgwụ mgbochi COVID-19 niile dị ugbu a site na otu injections ma ọ bụ abụọ.
Nnwale ụlọ ọgwụ na ndị ọrụ afọ ofufo 24 a na-agbabeghị ọgwụ maka ụdị ọgwụ mgbochi otu akwadoro.
Enwere ike iji capsule dị ka ihe nkwalite megide ụdị Delta na -efe efe.
Ọgwụ a nwalere na ezì na ụmụ anụmanụ emepụtala ọgwụ mgbochi ọrịa ka e nyechara ya.
Jerusalem Ọgwụ Oramed mara ọkwa na enwetala nkwado site na Tel Aviv Sourasky Medical Center iji malite nnwale ụlọ ọgwụ na ndị ọrụ afọ ofufo 24 na-enweghị ọgwụ mgbochi maka ụdị mkpụrụ ọgwụ capsule otu ọgwụ COVID-19.
Oramed kwupụtara na Machị na ọ nwalere mkpụrụ ọgwụ ya na ezì na anụmanụ emepụtapụtala ọgwụ mgbochi ọrịa ka ọ nyechara ya.
Otu ụdị ọgwụ mgbochi coronavirus nwere ike ịbụ “onye na -agbanwe egwuregwu” na mba nwere ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi dị ala, onye nrụpụta kwuru.
Companylọ ọrụ nke ọkachamara n'ịmepụta ụdị ọgwụ ọnụ nke a na-enyekarị site na ntụtụ, na-emekwa ule ugbu a maka capsule insulin ọnụ iji gwọọ ọrịa shuga Type-2. A na-ejikwa ọgwụ mgbochi COVID-19 niile dị ugbu a site na inje ma ọ bụ abụọ.
Dabere na onye isi Oramed Nadav Kidron, a na-atụ anya na nnwale ọgwụ mgbochi COVID-19 ga-amalite n'ọnwa na-abịa, ozugbo ọ nwetara nkwado ikpeazụ site n'aka Ministri Ahụike.
Kidron gbakwụnyere na enwere ike iji mbadamba ihe ahụ mee ihe dị ka ihe megidere ụdị Delta na -efe efe.
Kidron kwuru, "Ọgwụ mgbochi ọnụ anyị, nke na-adịghị ịdabere na eriri ọkọnọ miri emi n'adịghị ka ọgwụ mgbochi coronavirus ndị ọzọ, nwere ike ịpụta ọdịiche dị n'etiti obodo nwere ike ịpụta na ọrịa ma ọ bụ na ọ gaghị," Kidron kwuru.